Bhiridhadhi anotanga kutaura (1-22)
Anopa pfungwa yekuti vanakomana vaJobho vakaita chivi (4)
‘Dai wakachena, Mwari aizokudzivirira’ (6)
Anopa pfungwa yekuti Jobho haadi Mwari (13)
8 Bhiridhadhi+ muShuhi+ akabva apindura achiti: 2 “Ucharamba uchitaura zvakadai kusvikira riini?+ Mashoko emuromo wako akaita semhepo ine simba! 3 Mwari angatsaudzira pakutonga here,Kana kuti Wemasimbaose angaita zvinhu zvisina kururama here? 4 Kana vanakomana vako vaine zvavakamutadzira,Akavarega vachirangwa nemhaka yekupanduka kwavo;* 5 Asi dai ukatsvaga Mwari+Woteterera Wemasimbaose kuti unzwirwe nyasha, 6 Uye dai wakanyatsochena uye wakarurama,+Angadai akunzwaUye akudzorera panzvimbo yako chaiyo. 7 Uye kunyange wakatanga uri wepasi,Ramangwana rako raizobudirira.+ 8 Bvunza chizvarwa chekare,Uye funga nezvezvinhu zvakazivikanwa nemadzibaba avo.+ 9 Nekuti tinongova vazuro, uye hapana chatinoziva,Nekuti mazuva edu panyika akaita semumvuri. 10 Havangakurayiridzi,Vokuudza zvavanoziva* here? 11 Nhokwe ingareba pasina machakwi here? Tsanga ingareba pasina mvura here? 12 Painenge ichiri kutungira, isati yatemwa,Inotangira humwe uswa hwese kuoma. 13 Aya ndiwo magumo evese* vanokanganwa Mwari,Nekuti tariro yemunhu asingadi Mwari* ichaparara, 14 Ari kuvimba nezvinhu zvisipo,Uye anovimba nezvinhu zvisina kusimba seimba yedandemutande. 15 Achazendamira imba yake, asi haizorambi yakamira;Achaedza kuramba akaibata, asi haizorambi iripo. 16 Akaita semuti wakadiridzwa uri kukura muzuva,Uye nhungirwa dzake dzinotandavara mumunda.+ 17 Midzi yake inorukana pamurwi wematombo;Anotsvaga imba mumatombo.* 18 Asi kana adzurwa* panzvimbo yake,Nzvimbo yacho ichamuramba uye ichati, ‘Handisati ndambokuona.’+ 19 Uku ndiko kutsakatika kwaachaita;*+Vamwe vachabva vabuda muguruva. 20 Mwari haangamborambi vaya vanoramba vakaperera;*Uye haazotsigiri vanhu vakaipa,* 21 Nekuti achazadza muromo wako nekusekaUye miromo yako nekushevedzera kwekufara. 22 Vaya vanokuvenga vachapfekedzwa nyadzi,Uye tende revakaipa harizovipo.”
^ ChiHeb., “Akavaendesa muruoko rwekupanduka kwavo.”
^ ChiHeb., “Vobudisa mashoko mumwoyo mavo.”
^ ChiHeb., “Idzi ndidzo nzira dzevese.”
^ Kana kuti “anotsauka pakutenda.”
^ Kana kuti “Anotarisa imba yematombo.”
^ Kana kuti “amedzwa.”
^ Kana kuti “ndiko kuparara kwenzira yake.”
^ Kana kuti “vasina chavanopomerwa.”
^ ChiHeb., “haazobati ruoko rwevanhu vakaipa.”